Buunnoo Beddelleetti maaltu uumamee? - BBC News Afaan Oromoo
Buunnoo Beddelleetti maaltu uumamee?
22 Onkololeessa 2017
Image copyright Wendimagegn Asefa
Goodayyaa suuraa Rakkoo nageenyaa uumameen lubbuu namootaafi qabeenyarra miidhaan gaheera.
Jeequumsaafi walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa godina Buunnoo Beddelleetti dhuma torban darbee keessa uumameen walqabatee, balaa lubbuu namootaafi qabeenyaarra gahee ilaalchisee odeeffannoowwan adda addaa tamsa'aa jiru.
BBC'n dhimmicha adda baasuufi ragaa qabatamaa argachuuf jecha qaamoolee dhimmi isaa ilaalatu garaa garaa dubbiseera.
Godinichattis Magaalaa Beddellee dabalatee iddoowwan garaa garaatti hiriirawwan seeraan alaa 'eenyu akka waame hin beekamne' gaggeefameera.
Sababii jeequmsa hiririchaan walqabate uumameenis lubbuu namootaafi qabeenyaa irra balaan gahuu mirkaneeffameera.
Ragaaleen Naannoolee Oromiyaa fi Amaraa irraa argaman, sababii jeequmsaatiin hanga ammaatti lubbuun namoota 11 darbusaa kan mul'isan yoo ta'u, maddawwan gara biraa garuu lakkoofsichi kanaan ol ta'u eeru.
Haaluma jeequmsaan walqabateenis, jiraattoonni qabeenyaafi mana isaanii dhiisuun baqatanii buufata poolisii keessatti dahatanii akka jiranis, namoonni BBC'n dubbise ni dubbattu.
Namootni buufata Poolisii Aanaa Deeggaatti dahatanii jiran BBC'n dubbisee, namoota aanichatti du'an keessa dhalattoonni Tigiree jiru jedhan illeen, buufatichatti Komaandarri Itti aanaa, Saajin Ittafaa Mazigabuu garuu, ''kun sooba, namoota aanaa kanatti du'an sagal keessaa saddeeti dhalattoota Oromoo yoo ta'an, kan hafe tokko Amaaraadha,'' jedhaniiru.
Kana malees, dhalattoonni Amaaraa fi Tigiree dhibba torba ta'an buufata poolisii aanichaa keessatti dahatanii kan argaman ta'u, Saajin Ittafaan dabaluun dubataniiru.
Obboo Tamasgan Ayyaanaa, itti gaafatamaa dhimmoota Bulchinsaafi Nageenyaa Godina Buunnoo Beddellee fi godinichatti itti gaafatamaan waajjira Komunikeeshinii mootummaa Obbo Leykuun Takkaaliny akka nutti himanitti, hiriirawwan eenyu akka waamee hin beekamne magaalaa Beddellee dabalatee iddoowwan garaa garaatti gaggeefamu isaanii mirkaneessaniiru.
Itti gaafatamtoota kanneen irraa hubachuun akka danda'ameettis, jeequmsi sababa hiriiraatiin uumamee gara hannaafi qabeenya barbadeessuutti geeddarameera.
Akka Obbo Tamasgan jedhanitti, abbootiin qabeenyaa, qabeenya isaanii badiinsa irraa ittisuuf jecha dhukaasa bananii fi jeequmsa iddoowwan garaa garaatti uumameeni kan lubbuun namoota 11 darbe.
Dubbi himaan motummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Addisuu Araggaa, godina Buunnoo Beddellee aanaalee Coraafi Deegaatti namootni du'an Oromoota saddeetiifi dhalattoota Amaaraa sadii ta'uu ibsaniiru.
''Gocha yakkamaa kana ni balaaleffanna, balaa dhaqabeef gadda nutti dhagahamee ibsaa maatii miidhamtootaatiif ammoo jajjabina hawwinaaf,'' jechuun gadda isaanitti dhagahame ibsaniiru.
Obbo Addisuun, warreen badiinsa kanaa duuba jiran ''gareewwan sochii mootummaan naannichaa faayidaa uummataa eegsisuuf gochaa jirutti hin gamannee." jechuun ibsu.
Haaluma walfakkaatuunis, dubbi himaan Mootummaa Naannoo Amaaraa Obbo Nigusuu Tilaahun, jeequmsa godinichatti uumamee haalaan dukaa bu'aa kan jiraniifi lakkoofsi namoota du'anis kudha tokko ta'usaa mirkaneeffachu fuula Feesbuukii isanirratti maxxansaniiru.
Namootni lubbunsaanii darbes akkuma qondaltoota mootummaa Oromiyaatiin ibsame, saddeet Oromoota kaan hafan sadi ammoo dhalattoota Amaaraa ta'ulleen beeksisaniiru.
Kana malees, walitti bu'insichi akka kallattii walitti bu'insa qomoo qabaatu gochuun, dhugaa jallisuuf yaaluun balaa malee bu'aa kan hin qabaanne ta'uus, Obbo Nigusuun ibsaniiru.
Obbo Lammaa Magarsaa, Pireezidaantiin Naannoo Oromiyaa gama isaanitiin ibsa kalleessa OBN'f kennaniin akka jedhanitti, ''walitti bu'iinsa naannichatti taasifamaa jiran ni balaalleefanna, gochootni akkasii kunis kan uummata Oromoo fayyadanii miti. Gochiicha kan raawwataa jiran ammoo gareewwan diina uummata Oromoo ta'aniidha,'' jedhaniiru.
Rakkinicha furuudhaafis mootummaan naannichaa hojiiwwan garaa garaa raawwachaa jiraachu isaa illeen Obbo Lammaan dubbataniiru.